I-China Dongguan CNC Machining Company News | I-PTJ Hardware Inc.
Ikhaya > Blog > Company Izindaba
4 Izinhlobo Ezinkulu Izicelo Of High-End CNC Machine
Ngokuphenya okujulile esizeni nokuxhumana phakathi kwabasebenzisi bemboni, sinokuqonda okucacile kokuthuthukiswa kwalezi zimboni zabasebenzisi, izici zezingxenye ezijwayelekile, kanye nezidingo zemishini.
Ngobhubhane lwe-COVID-19, Ama-oda Womshini We-CNC Awa Endaweni Ephansi Eminyakeni eyi-11
Ngo-Ephreli 2020, umsebenzi womkhakha wezemishini wase-US wehla waya ezingeni eliphansi kunawo wonke eminyakeni eyi-11, ikakhulu ngenxa yomonakalo omkhulu ochungechungeni lokuphakelwa okubangelwa ubhadane lwe-coronavirus.
Inqubo Yokumaketha Nokwakha ye-Automobile Wheel Hub
UKWENZIWA kwamasondo ezimoto kuyishintsho kusuka kokuqinile kuya kokuqinile. Ukuma kwehabhu kwakhiwa ngokusebenzisa ngokuthepha, ukucindezela, ukwakha, njll ku-CNC machining. Namuhla, inqubo machining usebenzisa CNC machining isikhungo kukhiqizwa.
Iwebhusayithi ye-PTJ yaseJapane ivulwe ngempumelelo
Kulesi sifunda esinezindlela ezahlukahlukene, amandla okusebenzela izingxenye ezenziwe ngezifiso eziningi nokuqamba okuqhubekayo kukhulu, noma ngabe kungukubambisana kwe-CNC machining eJapan noma inkinga yebanga eJapan. , Basitshela ukuthi iJapane imakethe enkulu futhi engahle ibe khona.
Isitolo se-PTJ Sidlulise Ukucwaningwa Kwama-IATF16949 ngempumelelo
Ngemuva kweminyaka eminingi yokulungiswa ngabasebenzi benkampani, inkampani idlulise ngempumelelo i-IATF16949: 2016 (uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi-izidingo ezikhethekile ze-ISO9001 zokukhiqizwa kanye nezinsizakalo ezihlobene zomkhakha wezimoto) ukuhlolwa kwamasistimu ngoJanuwari 10th Ikhishwe ngokusemthethweni ku Ephreli kulo nyaka.
Yini Ongayenza Ukuze Ufune Ukuyenza Kuwe?
Eminyakeni embalwa edlule, kuthathe izinyanga noma amasonto ukudala imikhiqizo eyisibonelo. Ngisho nohlelo lokuklama olunemininingwane eminingi luthatha isikhathi ukulusebenzisa, futhi kuthatha isikhathi esithe xaxa ukugxila ekutholeni izinto zokwakha nokwenza ubujamo.
Uhlamvu lwe-PTJ Isingeniso: kan huang
UKan huang uthweswe iziqu e-lanxiang, une-BS kwezokuphathwa kwebhizinisi. Ubekunye neThe Flinchbaugh Company. Usebenza njengomphathi weworkshop yenkampani
Isingeniso sohlamvu lwe-PTJ: UJay chen
UJay chen usebenze kule nkampani kusukela ngo-2009. Usebenze esitolo iminyaka eyi-10 esebenza ngebhukwana, i-CNC Mills ne-CNC Lathes.
Umlingiswa we-PTJ Isingeniso: David Lan
UDavid uthweswe iziqu eShaoguan University uneziqu zeBachelor in Business Administration. Ngaphambi kokujoyina ifektri ye-PTJ ngoJanuwari 2012, wayeyiMenenja ye-zhilian, LLC e-shenzhen, e-china kusukela ngo-2007-2011.
Uhlamvu lwe-PTJ Isingeniso: Umphathi Wezentengiso uMichelle
UMichelle usebenzele i-The PTJ Factory kusukela ngo-2009 ekuphathweni kwezokuthengisa .Ikhono lakhe lebhizinisi liqinile kakhulu, futhi ikhasimende limnika ukubonga okuhle ngekhono lakhe.
Isingeniso sohlamvu lwe-PTJ: Boss zhou hanping
UZhou hanping waqala umsebenzi wakhe wokukhiqiza eFoxconn Factory eShenzhen, eChina ngo-2003. Wathuthuka ngezindima zakhe njengomshini uGeneral Foreman, iMenenja, futhi ekugcineni waba yimenenja yemishini yeFoxconn CNC. Unolwazi ezinhlobonhlobo zemishini nezinqubo ezikhethekile.